श्रीदेवी वाथटवमा डुबेरै मरेकी हुन् त ? – Janaubhar
श्रीदेवी वाथटवमा डुबेरै मरेकी हुन् त ?
प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २३, २०७४ | 275 Views ||
श्रीदेवीसँगको अन्तिम रातबारे पति बोनी कपुरको बयान !
बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीको ५४ वर्षको उमेरमा गत साता मृत्यु भयो । सुरुमा कार्डिक अरेस्ट कारण मृत्यु भएको बताइए पनि पछि बाथटबमा डुबेर मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो । उनको मृत्युको घटनालाई शंकास्पद मानेर दुबई प्रहरीले अनुसन्धान पनि ग¥यो । शंकाको सुई श्रीदेवीका पति बोनी कपुरमाथि सोझियो । तर पछि उनी निर्दोष ठहरिए ।
उनै बोनी कपुरले श्रीदेवीसँगको अन्तिम रातबारे एक फिल्म ट्रेन्ड एनालिस्ट कोमल नाहटासँग वेलिविस्तार लगाएका छन् । नाहाटाले बोनी कपुरको बयानलाई एउटा ब्लगको रुपमा उतारेर आफ्नो ट्विटर पेजमा सेयर गरेका छन् ।
बोनी भन्छन्, ‘२४ फेबु्रअरी बिहान मैले उनीसँग कुरा गरेँ । उनले मलाई भनिन्, पापा (श्रीदेवीले बोनीलाई पापा भनेर सम्बोधन गर्थिन्) म तिमीलाई मिस गरिरहेकी छु । मैले पनि उनलाई खुब मिस गरिरहेको थिएँ । तर, मैले उनलाई भनिनँ कि बेलुकी म दुबईमा उनलाई भेट्नेछु । जान्हवीले मलाई दुबई जान प्रेरित गरेकी थिइन् किनकी आमा कतै पनि एक्लै बस्न अभ्यस्त छैनन् र एक्लै हुँदा आफ्नो पासपोर्ट तथा महत्वपूर्ण कागजात हराउँछिन् भन्ने उनलाई डर थियो ।
श्रीदेवीको साथ पति बोनी कपुर
त्यसपछि मैले दिउँसो साढे तीन बजेको दुबई फ्लाइट समातेँ र बेलुकी ६ः२० तिर उनी बसिरहेको होटलमा पुगेँ । अचानक आफ्नो अगाडि मलाई देख्दा उनी अचम्भित भइन् र उनका आँखाहरु ठूल्ठूला भए । हामीले अंकमाल र चुम्बन ग¥यौं । अनि, करिब १५ मिनेट कुराकानी ग¥यौं । त्यसपछि म फ्रेस भएर आएँ र रोमान्टिक डिनरका लागि बाहिर जाने प्रस्ताव राखें ।
मेरो त्यो प्रस्ताव उनले स्वीकारिन् र प्रसन्न मुद्रामा नुहाउनलाई मास्टर बाथरुम छिरिन् । म लिभिङ रुममा गएर बसेँ । लिभिङ रुममा म साउथ अफ्रिका र इन्डियाबीचको क्रिकेट म्याच र त्यसपछि पाकिस्तान सुपर लिग क्रिकेटको हाइलाइट हेरिरहेको थिएँ । १५–२० मिनेटसम्म पनि उनी बाथरुमबाट ननिस्किएपछि म अलि बेचैन भएँ । त्यतिबेला ८ बजिसकेको थियो र शनिबार भएकाले रेस्टुरेन्टहरु भरिने डर थियो ।
मैले लिभिङ रुमबाटै चिच्याएर उनलाई बोलाएँ । दुईपटक चिच्याउँदा पनि जवाफ नआएपछि मैले टिभीको भोल्यूम सानो गरेँ र कान थापेँ । चाईंचुईं केही सुनिएन । त्यसपछि म उठेर बेडरुममा छिरेँ र बाथरुमको ढोका ढकढक गर्दै उनलाई ‘जान’ जान’ भन्दै बोलाएँ । तर भित्र धाराबाट पानी बगेको आवाज मात्र सुनियो । मलाई डर लाग्न थाल्यो ।
त्यसपछि मैले ढोकालाई धकेलेँ । भित्र चुकुल लागेको रहेनछ । ढोका खुल्नासाथ मैले अकल्पनीय दृष्य देख्न पुगेँ । बाथटब पानीले भरिएको थियो र त्यहाँ उनी शिरदेखि पैतलासम्म चुर्लुम्म डुबेकी थिइन् । मैले अत्तालिँदै उनलाई समाते, तर उनी चट्पटाइनन् । त्यसपछि मेरो हंशले ठाउँ छोड्यो ।
उनी पहिले डुबिन् र त्यसपछि बेहोस भइन् कि पहिले बेहोस भइन् र त्यसपछि डुबिन् भन्ने म जान्दिनँ । सायद मृत्यु हुनुअगाडि उनी धेरै छट्पटाइनन् होला । किनकि छट्पटाएको भए बाथटबबाहिर पानी पोखिएको हुन्थ्यो । तर एक थोपा पनि पानी बाहिर पोखिएको थिएन । यो रहस्य अब सायदै कहिल्यै खुल्नेछ ।’
Prevप्राप्त अधिकारको प्रयोग उत्पीडित वर्गका महिलाले गर्न पाउनुपर्छ
Nextकिन सुक्छ स्वर ? बचाउन के गर्ने ?